ကီဆောင် စီးပွားရေးဇုန်သို့ တောင်ကိုရီးယား စီးပွားရေး သမားများ သွားရောက်မည့် ကိစ္စ အစိုးရက ခ - Yangon Media Group
ကီဆောင် စီးပွားရေးဇုန်သို့ တောင်ကိုရီးယား စီးပွားရေး သမားများ သွားရောက်မည့် ကိစ္စ အစိုးရက ခ
ဆိုးလ်၊ မတ် ၁၅
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘက်ရှိ ပိတ်ထား သောပူးတွဲစီးပွားရေးဇုန်သို့ စီးပွားရေးသမားများကသွားရောက်ကာ ¤င်းတို့၏စံပြစက်ရုံများအားစစ်ဆေးရန်ကိစ္စအား တောင်ကိုရီးယားအစိုးရက ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ တောင်ကိုရီးယားအာဏာပိုင်တစ်ဦးက မတ် ၁၅ ရက်တွင်ပြောကြားလိုက်ကြောင်း ယွန်ဟတ်သတင်းက ဖော်ပြခဲ့သည်။
ကီဆောင်စီးပွားရေးဇုန်သို့ တောင်ကိုရီးယားလုပ်ငန်းရှင်များ သွားရောက်လည်ပတ်ခွင့် ပြုမည်၊ မပြုမည်ကို မတ် ၁၅ ရက်တွင် အစိုးရကနောက်ဆုံးအဖြေပေးရမည်ဖြစ်သည်။ မြောက်ကိုရီးယားက နျူကလီးယားနှင့် ဒုံးပျံများစမ်းသပ်ခဲ့သဖြင့် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အဆိုပါစက်မှုဇုန်ကိုပိတ်ထားခဲ့သည်။ အစိုးရက မတ် ၁၅ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ခွင့်ပြုမိန့်ကို မပေးဘဲထားလိမ့်မည်ဖြစ်ရာသွားရောက်နိုင် ခြင်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု တောင်ကိုရီးယားပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားလိုက်သည်။
တောင်ကိုရီးယားတစ်ဦး မြောက်ကိုရီးယားသို့သွားရောက်မည်ဆိုပါက မြောက်ကိုရီးယားက ဖိတ်ကြားရမည်ဖြစ်ပြီး လုံခြုံရေးကိုအာမခံကြောင်း အထောက်အထားများပါမှ တောင်ကိုရီးယား အစိုးရကခွင့်ပြုမည်ဟုဆိုသည်။ စက်မှုဇုန်၌ စက်ရုံများတည်ဆောက်ထားကြသည့် တောင်ကိုရီးယားလုပ်ငန်းရှင်များက မကြာမီက ကီဆောင်စက်မှုဇုန်သို့သွားရောက်ရန် မျှော်လင့်ထားခဲ့ကြသည်။ တစ်ချိန်က ဤစက်မှုဇုန်ကို ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖြစ်မှတ်ယူထားခဲ့ကြသည်။ ပြုံချမ်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်က ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြား တင်းမာမှုလျော့ပါးအောင် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။
မြဝတီမြို့ ကုန်သွယ်ရေး ဇုန်တွင် ထိန်းချုပ် ဓာတုပစ္စည်းများဖြစ်သော ဟိုက်ဒရို ကလိုရစ် အက်စစ်?
ရဲတပ်ရင်း (၂၈) တည်ဆောက်စဉ် သိမ်းဆည်းခံခဲ့ရသော မြေယာများအတွက် လျော်ကြေးပေးမည်
ပြည်ထောင်စု တရားစီရင်ရေး ဥပဒေကို စတုတ္ထအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းကို အမျိုးသားလွှတ်တော် အ??
လှေဖြင့် ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီ ၂၅ ဦးကို အမ်းမြို့နယ် တောထဲတွင် ဖမ်းမိ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြောင်းမြတံတား အပါအဝင် ကြိုးတံတားအစင်း ၃ဝ ရှိနေ၊ ကျန်ကြိုးတံတား ၂၉ စင်း၏
ခပ်တုံးတုံး ပုံစံ သရုပ်ဆောင်နေခြင်းကို ဂျွန်စီနာ မစိုးရိမ်